‘जुवातासबाट टाढा रहौँ’ Bizshala -
स्टडी ग्रुपले नेपाली विद्यार्थीका लागि ‘जब रेडी प्रोग्राम’ ल्याउँदै
मूल्य समायोजनपछि ‘ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना–१’को इकाइमूल्य कति ?
‘जुवातासबाट टाढा रहौँ’
तुलसीराम ढकाल– अध्यक्ष, नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम
यसपालिको दसैँ राजधानीमै मनाइन्छ। मेरो घर यहीँ भएकोले दसैँ प्रायः राजधानीमै मनाउँछु। घरपरिवार र बुवासँगै दसैँ मनाइन्छ। गएको दुई वर्षदेखि देश–विदेश घुम्न गएको छैन।
पोहोर कोभिडले आक्रन्त बनाएको थियो। अहिले खोप लगाएकोले पनि सहज भएको छ। अहिले यसै पनि उमंग रहेको छ।
मेरो अनुभवमा दसैँ रमाइलो बालपनमा नै हुन्थ्यो। पहिलेको दसैँ र अहिलेको दसैँमा आकाश–जमिनको फरक छ। पहिले घरमै दर्जी बोलाएर कपडा सिउने चलन थियो। दसैँमा मिठो खान पाउने तथा नयाँ लुगा लगाउने भन्ने थियो। आफन्तहरुसँग भेटघाट गर्न पाउँदा रमाइलो हुन्थ्यो।
अहिले खान–लगाउन दसैँ नै पर्खिनुपर्छजस्तो मलाई लाग्दैन।
बाल्यकालमा दसैँ–तिहारको केही रमाइलो अनुभव पनि छ। म त्यतिखेर ८ वर्षको हुँदो हो। रातभरि देउसीभैली खेलेर पैसा उठाइायो। मेरो भागमा त्यही २–४ रुपैयाँ परेको थियो होला। एकठाउँमा केही युवाले लंगुरबुर्जा खेलाइरहेका थिए। पहिले हेर्न मन लाग्यो। त्यसपछि खेल्न मन लाग्यो। सुरुमा केही कमाएँ। तर, पछि त सबै पैसा हारियो। मेरो जीवनमा यो धेरै ठूलो पाठ भयो। त्यसपछि मैले कहिले पनि जुवातास र लंगुरबुर्जा खेलेको पनि छैन। म आमयुवा साथीभाइलाई नखेल्न पनि सुझाव दिन्छु।
म आमलगानीकर्तालाई सेयर बजारमा धैर्यताका साथ कारोबार गर्न सुझाव पनि दिन्छु। बजार घटबढ हुन्छ। बढ्दा मात्तिने र घट्दा आत्तिने गर्नु हुँदैन। सेयर बजारमा अनुशासन र अध्ययन दुवै आवश्यक हुन्छ।
म बिजशालामार्फत सबैलाई बडादसैँ, तिहार र छठको शुभकामना दिन चाहन्छु। नवदुर्गा भवानीको कृपाले सबै जीवन सुखमय होस्।
(बिजशालाकर्मी अर्जुन तिमिल्सिनासँगको कुराकानीमा आधारित)
प्राइम कमर्सियल बैंकको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
आजसम्म कायम सेयरधनीले स्वाभिमान लघुवित्त र आईसीएफसी फाइनान्सको लाभांश पाउने
परिसंघद्वारा स्वदेशी वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसन सार्वजनिक
सुशांत केसी र डेभिड गुएटाको सहकार्यमा ‘गेट टुगेदर’ को नयाँ रिमिक्स रिलिज
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघले ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी’...
भविष्यका लागि बचत: सीआईटी वा एसएसएफमा आबद्ध हुँदा पाइन्छन्
– अनन्त्य सुन्दर काठमाण्डौ । अवकाशपछिको जीवन सुखमय होस् भन्ने...
आर्थिक अजेन्डामा समान दृष्टिकोण बनाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई
काठमाण्डौ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष...
औद्योगिक करिडोरमा मागेजति बिजुली दिन संरचना बनाउँदै विद्युत
–रमेश लम्साल हरेक युनिट बिजुलीलाई आर्थिक उत्पादनमा जोड्ने र...
पेट्रोल र डिजेलको भाउ घटाएर भारतले नयाँ मूल्यसूची पठायो, आयल
काठमाण्डौ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले डिसेम्बर १ अर्थात मंसिर...
विश्वकै स्वादिष्ट खान्कीको सूचीमा पर्यो मःम
काठमाण्डौ। नेपाली जनजीवनमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाउन सफल मःम...
नाडाको अध्यक्ष प्रत्यासी करण चौधरीद्वारा प्यानल घोषणा
काठमाण्डौ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आगामी निर्वाचनका...
स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई बढवा दिन राज्य–निजी क्षेत्रबीच